UJEEDD: Baaq Nabadeed Colaadda Mesagawaay.
Dhammaan Muddulloodka wax garadka ah ee ku nool Skandinaviya ( Sweden. Denmark, Finland, Norway) Waxay ugu baaqayaan walaalahooda deggan Mesagawaay iyo agagaarkeeda in ay joojiyaan colaadda dhexdooda ka aloosan iyo in ay wada hadal iyo is faham ay ku dhamaystaan wax waliba oo maslaxadooda ah.
Jaaliyadda Muddullood waxay tacsi tiiraanyo leh u diraysaa dhamman ehelkii dhimashada iyo dhaawaca iyo burbur hanti ka soo gaartay colaadaasi. Waxaan xusuusinaynaa Mudulloodka deggan Galgaduud in uu ahaa deegaankooda dhul nabad ah oo hawlaha adeegyada bulshada si fiican uga socotay sida hawlaha caafimaadka iyo ganacsiga iyo waxbarashada.
Waxaana ka xunnahay oo aan ka waaninaynaa idaacadaha iyo joornaalada qaarkood in ay joojiyaan wararka lagu buun buuninaayo colaaddaha yar yar ee ka dhex jirto dadyow walaala ah.
Ugu dambayn waxaan Allah subxaanahu watacaala ka baryaynaa in ay ku guulaystaan dadaalka nabadaynta ah ay wadaan culamaáudiinka iyo odi dhaqameedyada Muddullood ay ugu horreyaan Macllin Nur iyo Sheikh Cismaan Xiddig iyo Macallin Cabdullahi Joqof iyo Imaam Maxamud Imaam Cumar iyo Abdullahi Ghedi Shadoor.
Xiriiriyaha Jaaliyadda Muddulood ee Skandinaviya
Tel & fax 031-154314 Gothenburg/Sweden
Baaq Jaaliyadda Mudullood ee Skandinaviya
Xubnaha USC/SSA iyo dhammaan Mudulloodka ku nool wadamada Skandinaviya waxay walaac ka muujiyeen dagaaladda ka dhex dhacay Mudulloodka dhexdiisa oo ku dagaallamay wax aanba meesha jirin sida Dawlad ku-meelgaar ah ( Kooxda CARTA ). GUJI.HALKAN
Fikrada maqaamka xamarcaddeey ee: maxuu ka qabaa Dr Cabdulkadir Xaaji Suufi (Muriidi golf), waa qoraal dheer oo... GUJI.. 22/8
OGEYSIIS MINNESOTA: Jaaliyadda Somaliyeed ee Ogaadeenya
Midowga Afrika (AU, African Union) ee lagu aasaasay magaalada Durban ee Koonfur Afrika ayaa.. GUJI.. 21/8
Mohamed-Deeq Abdi-madar ayaa Jawaab ka bixiyey maqaalkii uu qoray.... GUJI.. 21/8